▷ Nweta OLED Nintendo Switch tupu ekeresimesi na ngwugwu ndị a - 【 Comparison】 2022
Nweta OLED Nintendo Switch tupu ekeresimesi na ngwugwu ndị a
Asị na ị ga - enweta ee (Ọmụma Ihe Ọmụma)
Camp, Jim (Onye edemede)
Kama ịmalite ha n'oge nnukwu ahịa ahịa Black Friday na Cyber ​​​​Monday nke afọ a, Amazon chere ruo taa iji weghachite Nintendo Switch OLED. Ihe njikwa na ngwugwu dị iche iche dị ugbu a maka ịtụ maka nnyefe ozugbo.
Amazon nwere naanị ụdị ọcha nke Nintendo Switch OLED na ngwaahịa maka € 309.99. Banyere ngwugwu, nhọrọ kacha mma gụnyere mgba ọkụ OLED na Just Dance 2022 maka € 338.99. Ị nwekwara ike họrọ console nwere Metroid Dread ma ọ bụ Assassin's Creed 3 Remastered ma ọ bụrụ na-amasị gị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na nhọrọ ndị ahụ abụghị nke gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị masịrị Neon console, a ka nwere ike ịnweta ya. Site na ngwugwu ndị a ị nwere ike ịchekwa ihe ruru € 20, mana naanị nsogbu enwere ike ebe a bụ na a na-atụ anya ịnyefe site na Disemba 16. Ị chọrọ otu mbụ? Amazon bụ ụzọ aga. Agbanyeghị, opekata mpe otu console ga-abata tupu ekeresimesi.
Nintendo Gbanwee OLED consoles na ngwugwu na ngwaahịa
Nke ahụ bụ ihe niile ugbu a. Maka njikwa ọkọlọtọ, ị nwere ike lelee ntuziaka anyị maka azụmaahịa Nintendo Switch kacha mma dị taa. Ma ọ bụrụ na ihe niile Nintendo Switch OLED gear akpọnwụwo, ị nwere ike ilekwasị anya na Nintendo Switch OLED restock center maka mmelite kachasị ọhụrụ.